एक नजरमा मोबाइल गेमि Marketing मार्केटिंग, अपरेटरहरूबाट उत्तम शिक्षा Martech Zone
एक नजरमा मोबाइल गेमि Marketing मार्केटिंग, अपरेटरहरूबाट उत्तम शिक्षा
मंगलवार, मे 2, 2017 बुधवार, मई 3, 2017 Cáit उर्जा
एक दशकमा र स्मार्टफोनले राम्रोसँग र सही रूपमा कब्जा गर्यो। डाटाले देखाउँदछ कि २०१ by सम्ममा, संसारभर २. 2.53 अरब स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरू हुनेछन्। औसत प्रयोगकर्ता तिनीहरूको उपकरणमा २ apps अनुप्रयोगहरू छन्.
जब त्यहाँ धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ व्यवसायले कसरी आवाजलाई काट्छ? उत्तर एप मार्केटिंगको लागि डेटा-नेतृत्वको दृष्टिकोणमा निहित छ र मोबाइल मार्केटर्सबाट सिकेको कुरा बुझ्नेहरू जसले यसलाई उनीहरूको फाँटमा मार्दैछ।
गेमि sector क्षेत्र, अब एक परिपक्व मोबाइल बजार अविश्वसनीय सफलता रेकर्ड गर्दै छ। कभरेजमा उन्नतिका लागि र मोबाइल जडान, डेटा विश्लेषण, UX र मोबाइल मार्केटि improveमा सुधारका लागि धन्यवाद। २०१ global को अन्त्यमा ग्लोबल गेमि revenue राजस्वले $ १ अर्ब डलर मार्यो। गेमि opera अपरेटरहरू जान्दछन् कि अधिग्रहण महत्त्वपूर्ण छ, तर मार्केटिंग बजेटहरू मोबाइलमा अवरोध अभियानमा खर्च गरिन्छ। तिनिहरु तिम्रो पैसाको लागि अधिक धमाका दिन्छन्। हाम्रो मोबाइल iGaming इनसाइट रिपोर्ट मोबाइल मा प्रतिधारण बूस्टिंग को लागी केहि चाल्दछ।
तपाईंको प्रतिलिपि यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस्
गेमि companies कम्पनीहरूले विशिष्ट मोबाइल अधिग्रहण मोडेलहरू, शक्तिशाली ग्राहक यात्रा, प्लेयर गतिविधि र यसमा समावेश प्रक्रियाहरूको स्वचालनमा आधारित ट्रिगरमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। बेटिंग र गेमि। अपरेटरहरू तिनीहरूको खेलाडीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो समय को लागी सबै भन्दा राम्रो च्यानल को उपयोग को बारे मा सजग छन्। In-app बाट सूचनाहरू पुश गर्न, व्यक्तिकरणको लागि ट्रिगर गर्दछ, iGaming अपरेटरहरूले मोबाइल युद्ध जित्दैछन्।
एलिमेन्ट वेभमा हामी युरोपमा केहि सबैभन्दा ठूलो बेटिंग र गेमि। अपरेटरहरूसँग काम गर्दछौं। हामीले आधा अरब मोबाइल मार्केटि messages सन्देशहरू वितरण गरेका छन र असंख्य अनुप्रयोग घटनाहरूको विश्लेषण गरिएको छ। हाम्रो मोबाइल iGaming इनसाइट गाइड मोबाइल मार्केटरहरु बाट सिक्न को लागी नि: शुल्क उपलब्ध छ।
मोबाइल iGaming इनसाइट्स गाइड
गाइडले अनुप्रयोगहरूमा वास्तविक-समय र पूर्व-म्याच प्लेयर व्यवहारमा गहन दृष्टिकोण राख्छ। प्लेयर व्यवहारमा आधारित व्यक्तिगतकरणको लागि डाटा-संचालित दृष्टिकोणले स eng्लग्न मोबाइल अनुभवहरू प्रदान गर्दछ।
हाम्रो रिपोर्टले हजारौं इन-अनुप्रयोग सन्देशहरू, पुश सूचनाहरू र खेलकुद र क्यासिनो अनुप्रयोगहरूमा प्लेयर व्यवहारहरूको नतीजामा केन्द्रित गर्दछ।
डाटा स्पष्ट प्रवृत्ति र दर्ता यात्रा मा भविष्यवाणी परिणामहरू देखाउँदछ। कहिलेकाँही मोबाइलमा रेजिष्ट्रेसन प्रक्रिया क्लन्की वा जटिल हुन्छ। यो खेलाडीहरूको लागि पूर्ण गर्न को लागी एक चुनौती हुन सक्छ। हाम्रो रिपोर्टले दर्ता पूरा गर्ने खेलाडीहरूको स out्ख्या रेखांकित गर्दछ र त्यसपछि यसलाई रोक्नका लागि सुझावहरू सहित मंथन गर्दछ।
प्लेयर गतिविधि र बोनस दावी दरहरूले मोबाइल मार्केटिंग प्रयासहरूको सफलता वा असफलताको स्पष्ट संकेत दिन्छ। जब तपाईंको प्रयोगकर्ताहरू ड्रप-अफ हुन् र प्रक्रियामा यसलाई राम्रोसँग काम गर्नको लागि तपाईंको रणनीति मिलाउन सहयोग गर्दछ।
वास्तविक समय iGaming को लागि चाँदीको बुलेट हो र हामी प्रस्ताव गर्दछौं कि यो केवल समय को कुरा हो, यो सबै ठाडो लागि मानक हुनु अघि। वास्तविक समय ट्रिगरहरू अब प्रयोगकर्ताले के गरिरहेको छ, रियल-टाइम प्रासंगिक मेसेजिंग र वास्तविक-समय विश्लेषणले स and्लग्नता र अवधारणमा वृद्धि गर्दछ। सामाजिक र दोस्रो स्क्रीनिंगको साथ जस्तै, त्यहाँ सट्टेबाजी र गेमि। अपरेटरहरू र खेलहरू बीचको वास्तविक समय प्रकृतिलाई धन्यवाद अनुप्रयोगहरू बीच एक अन्तर्निहित लिंक छ। सबै ठाडो ठाँउमा उही भन्न सकिन्छ।
स्मार्टफोनको विकासको अर्थ आईग्यामि opera अपरेटरहरूले गर्नका लागि धेरै परिवर्तनहरू गरे। जहाँ एक पटक खेलाडी बुकीहरूमा गए, अब तिनीहरू आर्मचेयरको आरामबाट शर्त लिन सक्छन्, खेल हेरिरहेको बारमा, उनीहरूको कम्युटमा वा बाथरूममा पनि! डाटा, अब उपलब्ध चौडाइ दिमागमा उड्ने छ: स्थान, भाषा र उपकरण स्तर देखि, सट्टेबाजी इतिहास, अनुप्रयोग घटना उपयोग, र जुवा प्राथमिकता। डाटाको यो स्तर र यस डाटाको उपयोगले आई-गेमि opera अपरेटरहरूलाई अन्य ठाडोहरूमा धेरै व्यवसायहरूमा किनार दिन्छ।
एलिमेन्ट वेवको बारेमा
एलिमेन्ट वेव खेल सट्टेबाजीको लागि वास्तविक समय मार्केटि auto स्वचालन निर्माण गर्दछ, मोबाइल इन-प्ले लेनदेनलाई १०X सम्म बढाउन। गाल्वेमा आधारित, आयरल्याण्ड एलिमेन्ट वेवले अर्को पुस्ता टेक्नोलोजी र विशेषज्ञले व्यवस्थित सेवाहरू प्रदान गर्दछ, जुन सट्टेबाजी र खेल उद्योगहरूमा छ।
टैग: क्यासिनो अनुप्रयोगहरूयात्रा गर्दैतत्व तरंगएलिमेन्टवेभजुवा खेल्नेखेलgamersखेलखेलस्थानसन्देश पठाउँदैमोबाइल जुवामोबाइल खेलहरूमोबाइल गेमि।मोबाइल गेमि apps अनुप्रयोगहरूमोबाइल गेमि ins अंतर्दृष्टिमोबाइल igaming इनसाइट गाइडमोबाइल सन्देशअनलाइन जुआखेलाडीवास्तविक समयखेल जुवाखेल जूवा अनुप्रयोगहरू
Cáit पावर मोबाइल CRM टीम लीडको लागि हो एलिमेन्ट वेव, जहाँ तिनीहरूले अविश्वसनीय टेक्नोलोजी बनाउँदछन् जुन मोबाइल मार्केटि auto स्वचालनलाई शक्ति दिन्छ। क्याटको पृष्ठभूमि मोबाइल मार्केटिंग, पत्रकारिता र यात्रामा छ।
inMotionNow मार्केटिंग ईमेलहरूको लागि अनलाइन प्रूफिंग कार्यप्रवाह सुरूवात गर्दछ